Nahazo Interface Reporting Pretty (Beta) | Google Analytics Martech Zone
Nahazo Interface Reporting Pretty (Beta) i Google Analytics
Talata, May 8, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Vao nahazo naoty tao anaty boaty aho ary nisy tsy nampoizina rehefa nanokatra ny Google Analytics aho. Nahazo interface mivantana amin'ny tatitra beta izay manaitra tokoa izy ireo. Raha ny marina dia tena nanomboka tiako ilay izy Clicky noho ny tatitra lehibe. Mety hahatonga ahy hifikitra amin'ny Google anefa izany!
Ity misy rohy mankany amin'ny Product Tour momba ny Tatitra momba ny Beta Google Analytics vaovao.
Fanatontoloana, fametrahana, fanodinkodinana, Islandy ary fandikana tranokala sary saka japoney
Tiger Woods dia TSY miasa amin'ny fahalemeny
May 9, 2007 ao amin'ny 3: 47 PM
Manantena ny hahita an'io amin'ny asany aho rehefa avadika amin'ny kinova vaovao ny kaontiko. Somary malama ihany ilay izy.
Azoko antoka fa tsy hanosika an'i Clicky ianao, tadidio fotsiny ireo rohy hyperlink izay mitondra anao hatrany amin'ny toerana niavian'ny mpitsidika anao, sy ny fampidirana Feedburner 😉
May 9, 2007 ao amin'ny 4: 23 PM
Mampiasa Clicky amin'ny alàlan'ny Performancing.com aho. Tena tiako izany hatreto ary afaka herintaona afaka tamin'ny serivisy premium aho tamin'ny famerenako azy ireo tao amin'ny bilaogiko. Manontany tena aho raha manomboka miahiahy i Google noho ny serivisy Stat rehetra mipoitra izay toa tena tsara lavitra ary mora kokoa ny miasa.
May 9, 2007 ao amin'ny 6: 34 PM
Toa tsara izany .. rahoviana no ahodin'izy ireo izany?
May 9, 2007 ao amin'ny 6: 56 PM
Efa nahazo ny fidirana aminy ao anatin'ny kaontiko isan'andro aho. Nanao tatitra an-taonina niaraka tamin'io aho ary tena nahagaga ahy! Tsy misy ao amin'ny kaontinao ve?
May 10, 2007 amin'ny 2: 31 AM
Mihodina tsikelikely mandritra ny herinandro vitsivitsy ny interface vaovao. Raha misy tsy mahita ny interface vaovao dia tokony hanao izany tsy ho ela ianao.